သင့်ချွေးနဲစာကိုအလိမ်မခံပါနှင့် ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Tuesday, April 26, 2016 Knowledge No comments
လင်ဇီး ရှိုင်းဟုတ် / Unicity / Aim Star / Tian / MLM/ Zhulian/
ပြည်တွင်းမှာ MLM (Multi Level Marketing) နဲ့ပတ်သက်လို့ လူငယ်တွေ တော်တော်များများလုပ်ကိုင်လာတာကို တွေ့နေရသလို အချို့ လူကြီးပိုင်းတွေလည်း လုပ်ကိုင်လာတာကိုတွေ့ရတယ် ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် MLM ကိုမလုပ်ဖူးတဲ့အတွက် အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဘယ်လိုဝင်ငွေရတယ်ဆိုတာ သေချာမသိရပေမယ့် လေ့လာကြည့်ရသလောက်ဆိုရင် အာမခံချက် မရှိတဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခုလို့ သုံးသပ်ကြည့်ချင်တယ် ။ လူတွေကို မက်လုံးပေး စွဲဆောင်လေ့ရှိပြီး တစ်လအတွင်း ဝင်ငွေဘယ်လိုရမယ် သုံးလဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အဓိကထား စွဲဆောင်လေ့ရှိကြတယ် ။ အကျိုးအမြတ်က မရှိဘူးတော့ မဟုတ်ဘူး ရှိပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကပဲ ခေါင်းပုံဖြတ် အောက်က Member တွေကို မက်လုံးပေးလို့ အဖွဲ့ ဝင်တွေတိုးလာအောင် စွဲဆောင်ပြီး ပစ္စည်း အရောင်း၊အဝယ်ဖြစ်ရင် ရာခိုင်နှုန်းအပေါ် အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့် ရှိကြတယ် ။ ဥပမာ ခေါင်းဆောင်က ငါးသောင်းနဲ့ ရောင်းခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို ခေါင်းဆောင်ခွဲအသီးသီးက ပြန်လည်ရယူပြီး member တွေက အရောင်း၊အဝယ်ဖြစ်ရင် ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးအမြတ်တွေကို ခွဲဝေလို့ နောက်ဆုံးတွက်ချက်ကြည့်ရင် ပစ္စည်းရဲ့ တန်ဖိုးက တကယ်တော့ တစ်သောင်းလောက်ပဲ ရှိတယ် ။ ဝယ်ယူတဲ့လူတွေက ပစ္စည်းကို မတန်တဆဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်ယူလိုက်ရတဲ့ သဘောဖြစ်သွားတယ် ။ ဒါက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး ။ ရောင်းသူ၊ဝယ်သူချင်း အဆင်ပြေလို့ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စပါ ။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ ပုံက People's Daily, China ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာက ကူးယူလာတဲ့ ပုံဖြစ်ပြီး MLM ခေါင်းဆောင် ၂၆ ယောက် ကို တရုတ်ရဲတွေ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံပါ ။ သတင်း အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားတာ မရှိသေးပေမယ့် သတင်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ " Guiyang police announced Mon crackedalarge pyramid scheme, detained 26 ‪#‎MLM‬ leaders. More than 4000 sales involved " ဆိုပြီး ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် ဒီလို အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်အတွက် MLM က တကယ် အာမခံချက်ရှိနိုင်ရဲ့ လားဆိုတာပါ ။ ဒါပေမယ့် လုပ်နေတဲ့ လူတွေက တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးလာ တာကိုတော့ တွေ့ရတယ် ။ ဒါက မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ ၁ . အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပြဿနာ ၂ . ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ပြည်သူ ၃ . လူတွေရဲ့ လောဘ ၄ . ဗဟုသုတ နည်းပါးမှု အထက်ပါ လေးချက်ကြောင့် MLM တွေဟာ အဆိုပါ အားနည်းချက်တွေကို အဓိကထားလို့ ဈေးကွက်ချဲ့ ထွင်လာနိုင်ခြင်းလို့သာ မြင်မိပါကြောင်း သုံးသပ်လိုက်ရပါတယ် ။
Credit - ညီသ